Fandikana fepetra :: Nakaton’ny polisy ireo tsena tamin’ny faritra enina • AoRaha
Fandikana fepetra Nakaton’ny polisy ireo tsena tamin’ny faritra enina
Nanakatona an’ireo tsena mbola mivoha aorian’ny 12 ora antoandro ny Polisy sady nampody ireo olona nifamezivezy, omaly. Betsaka no tsy manaraka an’ireo fepetra napetraky ny fitondram-panjakana hisorohana ny fiparitahan’ny aretina “coronavirus”. Isan’izany ny teny Ambohimanarina, Ambohipo, Isotry, Ankazomanga, Andravoahangy ary Anosibe.
“Ho an’ny faritra Ankazomanga, Andravoahangy, Ambohipo dia noesorina avokoa ireo olona mivarotra eny amoron-dalana sy eny an-tsena, ankoatra ny fanakatonana ireo mpivarotra nivoha. Nakatona tanteraka ny tsenan’i Namontana. Ny tetsy Ambohimanarina indray, dia sady nidina teny an’elakelantrano ny Polisy nampody ireo olona mitangorongorona sy milalao ivelan’ny tranony”, araka ny tatitra voaray teo anivon’ ny Polisim-pirenena.
Tsy mitsahatra amin’ny asa fampandriana fahalemana kosa ry zareo na dia ao anatin’ny fanentanana ny olona amin’ ny fanajana ireo fitsipika. Mpanendaka roa teny amin’ny faritra Isotry no tra-tehaka nangarom-paosy tao an-tsena. Noentina teny amin’ny paositry ny Polisy avy hatrany.
Fitiliana ny tsimok’aretina « Covid-19 » :: Hanokatra laboratoara maromaro ny fitondram-panjakana
Fiparitahan’ny valanaretina :: Mitombo isa ireo mararin’ny «coronavirus” vokatry ny fifampikasohana